जेठ १० सम्म लक-डाउन बढा`उने तयारीमा सरकार !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/जेठ १० सम्म लक-डाउन बढा`उने तयारीमा सरकार !!!
कोरोना भाइरस संक्र`मणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै सरकारले फेरि १५ दिन लकडाउन (बन्दा-बन्दी) थप्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रि परिषद्को आइत`बारको बैठकमा पछिल्लो समय नेपाल कोरोना संंक्र`मित बढ्दै गएको र छिमे`की मुलु`क भारतमा पनि संक्र`मण दर बढि`रहेकाले जोखिम कायमै रहेकाले लकडाउन थप १५ दिन बढाउनु`पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
भारतले लक-डाउनलाई निर`न्तरता दिइर`हेका बेला खुला सिमाना भएको नेपालमा लक-डाउन हटाउँदा स्थिति जुन`सुकै बेला पनि भया`वह हुन-सक्ने भन्दै जेठ १० गतेसम्म बढाउने सहमति भएको स्रो`तले बतायो।
केही मन्त्री`ले कोरोना प्रभा`वित क्षेत्र वर्गीक`रण गरी सोही आ`धारमा लक-डाउन खुकुले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल`गन्जमा संक्र`मितको सं`ख्या अचानक बढेपछि सर`कार थप सतर्क अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल`मा आइतबार सम्म ७५ जना संक्र`मित भएका छन्। जसमा १६ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
केही मन्त्रीले कोरोना प्रभावित क्षेत्र वर्गीकरण गरी सोही आधारमा लकडाउन खुकुले गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपालगन्जमा संक्र`मितको सं`ख्या अचानक बढेपछि सरकार थप सतर्क अवस्थामा पुगेको छ। नेपालमा आइत`बारसम्म ७५ जना संक्र`मित भएका छन्। जसमा १६ जना उपचा`रपछि घर फर्किएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सके सम्म काठमाडौं नआउन सरकारको आग्रह